पोखरा र धनगढीमा ओली पक्ष पनि सडकमा : ओली समुहका नेताको कारको साँचो प्रचण्ड समुहले थुते ! « Bagmati Online
पोखरा र धनगढीमा ओली पक्ष पनि सडकमा : ओली समुहका नेताको कारको साँचो प्रचण्ड समुहले थुते !
काठमाडौ । आन्दोलनरत नेकपाले आह्वान गरेको आम हड्तालका कारण जनजिवन प्रभावित भएको छ । पोखरा र धनगढीमा ओली पक्ष पनि सडकमा आएको छ। आमहड्तालको विरोधमा सत्तारूढ नेकपा ओली पक्षका युवाले पोखरा र धनगढीमा प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्। उनीहरुले गरिखानेलाई काम गर्न दिनुपर्ने भन्दै नाराबाजीसमेत गरेका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यलयदेखि धनगढी चौराहसम्म र्‍याली र नाराबाजी गर्दै अघि बढेका थिए। ‘व्यापारी साथी एक हौं बन्द गर्न पाइदैन, बन्दलाई खुला गरौं।।। ’लगायतका नारा उनीहरूले लगाएका थिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी९नेकपा० का दुवै समूह आमुन्ने सामुन्ने आएपछि धनगढीको चौराहा त ना व ग्रस्त बनेको छ। नेकपा ओली समूहका विद्यार्थी नेता कुमार बडेला सवार कारको चाबी नेकपाकै अर्को प्रचण्ड–नेपाल समूहका कार्यकर्ताले थु ते पछि विवाद निम्तिएको हो। अहिले ओली समूहका कार्यकर्ताले चाबी फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै चौराहामा नाराबाजी गरिरहेका छन् भने अर्को प्रचण्ड–नेपाल समूहले हडतालको अवेज्ञा गरेको भन्दै थु ति एको चाबी फिर्ता नदिने अडान राखेको छ।